China Besuper Fantastic Colorful Baby Training Pants Manufacturing and Factory |Baron
Fitaovana Eco Friendly
TCF hazo pulp (100% klôro tsy misy) miaraka amin'ny FSCvoamarina.
Mifoka rivotra sy mitsoka
Teknolojia breathability manokana & Super absorbentcore miaraka amin'i Germany SAP mba hanomezana maharitrafiarovana.
Fiarovana leakage mahomby
Silky malefaka manodidina andilany & Rano-hiddyfototra & Efficient leakage sakana manampy amin'ny fisorohana ny fivoahanamba hitazomana ny zanakao ho maina-raha sanatria
Mahafatifaty & miloko Backsheet Design
Famolavolana backsheet mahafatifaty sy miloko miaraka amin'ny ranomainty fiarovana amin'ny tontolo iainana.
Fit amin'ny akanjo ambany
Ny sosona anatiny sy ivelany faran'izay malefaka dia manome kiraro malefaka sy lehibe ho an'ny zanakao.
Menaka Aloe Vera natoraly
Ny menaka aloe vera voajanahary dia mamelona ny hoditry ny zanakao ary misoroka ny maimaika.
BesuperFantastic Colorful Baby Training Pants dia natao hanampy amin'ny fanaovana ny fizotran'ny fanofanana vilany ho malama araka izay tratra.
Tianay ny hahatonga ity tetezamita ity ho mahafinaritra sy azo antoka miaraka amin'ny pataloha fanazaran-tena.
Besuper Fantastic Colorful Diaper Production Line
Ny fomba fanaraha-maso sy ny fitantanana kalitao dia nohamarinin'ny antoko fahatelo iraisam-pirenena anisan'izany ny BRC an'i Grande-Bretagne, FDA an'ny Etazonia, CE an'ny EU, ISO9001: 2008, SGS any Soeda, TUV, FSC ary OEKO Z100.
Global Top Materials
Besuper dia niara-niasa tamin'ny mpamatsy akora maromaro anisan'izany ny mpamokatra SAP Japoney Sumitomo, ny mpamokatra SAP alemà BASF, ny orinasa USA 3M, ny German Henkel ary ny orinasa 500 ambony eran-tany.
Besuper dia manondrana any amin'ny firenena 60 mahery eran'izao tontolo izao, toa an'i UK, CZ, Russia, USA, Canada, Panama, New Zealand, Australia, India, Korea, sns. Nanolo-tena izahay hanolotra fikarakarana azo antoka sy ekolojika ho an'izao tontolo izao.
Lanja manontolo (g)
Fonosana pcs / fonosana & kitapo / ctn
LALANA BEZA (kg)
12 kg ambony
(mihoatra ny 26 lbs)
Alefaso izao ny fanontanianao:
ambongadiny diaper zaza
pataloha fiofanana amin`ny alina
panties fiofanana plastika
panties fiofanana potty
mpanamboatra diaper tsy miankina
pataloha diaper pull-up
pataloha fanofanana trano fidiovana
Diaper Eco kalitao avo lenta, Mpanamboatra Diaper, Bamboo Liner, Diaper vao teraka, Diaper Baby, Famafana zazakely biodegradable organika,
Mpanamboatra Diaper, Famafana zazakely biodegradable organika, Bamboo Liner, Diaper Baby, Diaper vao teraka, Diaper Eco kalitao avo lenta,